IiNdumiso Chapter63 1 Umhobe kaDavide:oko ebesentlango yakwaYuda. Thixo, unguThixo wam, ndiya kukuquqela kwakusasa, Umphefumlo wam unxanele wena; inyama yam iyakulangazelela Ezweni elingumqwebedu, elibharhileyo, eligenamanzi. 2 Ndenjenjalo ukukhangela kuwe engcweleni, Ukuba ndibone amandla akho nobuqaqawuli bakho. 3 Ngokuba inceba yakho ilungile ngaphezu kobomi, Umlomo wam uya kukuncoma. 4 Ndiya kwenjenjalo ukukubonga lo gama ndihleliyo, Ndiphakamise izandla zam egameni lakho. 5 Umphefumlo wam uhluthi umongo namanqatha; Ngemilebe yomlomo wam omemelelayo uya kukudumisa umlomo wam, 6 Ndakukukhumbula emandlalweni wam, Emilindweni yobusuku ndicamanga ngawe. 7 Ngokuba uluncedo kum, Ndinokumemelela esithunzini samaphiko akho. 8 Umphefumlo wam uthene mbende nawe; Isandla sakho sokunene sindibambile. 9 Ke bona bafuna umphefumlo wam ukuze batshabalale, Baya kutshona kwezisezantsi iindawo zehlabathi. 10 Baphalazelwa emandleni ekrele; Baba sisabelo seempungutye. 11 Ke yena ukumkani uya kuvuya ngoThixo; Baya kuqhayisa abo bonke bafunga yena; Ngokuba uya kuvingcwa umlomo wabathetha ubuxoki. [ Prev ]